कोरोनाको खोपलाइ लिएर WHO बाट भर्खरै आयो दु:खद खबर ! – Life Nepali
कोरोनाको खोपलाइ लिएर WHO बाट भर्खरै आयो दु:खद खबर !
१९ भदौ,काठमाडौं । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)ले कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) विरुद्धको खोप सन् २०२१ को मध्यसम्म आम मानिसमा प्रयोगको लागि उपलब्ध नहुने बताएको छ । शुक्रबार डब्ल्यूएचओकी प्रवक्ता मगरेट ह्यारिसले खोपको प्रभावकारितामा कडा परीक्षण गरिनुपर्ने उल्लेख गरिन् । उनका अनुसार अहिलेसम्म कुनै पनि खोपले क्लिनिकल परीक्षणको महत्वपूर्ण चरण पार नगरेको र कुनैमा पनि स्पष्टरुपमा डब्ल्यूएचओले तोकेअनुसारको ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रभावकारिता पाइएको छैन । *** पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ***
गत अगष्ट महिनामा रुसले कोरोना खोपको घोषणा गरेसँगै अहिले खोपको सुरक्षा र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ । रुसले मानिसमा खोपको परीक्षण सुरु गरिएको दुई महिनाभित्रै खोपको घोषणा गरेको हो । अमेरिकाको सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारीहरु र फाइजर इंकले बिहीबार खोप अक्टोबरसम्ममा वितरणको लागि तयार हुने बताएका थिए । अमेरिकामा नोभेम्बरमा हुन गइरहेको निर्वाचनअघि नै मानिसहरुलाई दिने तयारीका साथमा अमेरिकामा खोपको वितरण गर्न लागिएको बताइएको छ ।
Previous खुसिको खबर – नेपालमा आज एकैदिन अहिलेसम्मकै धेरै संक्रमितले कोरोना जितेर घर फर्के !
Next कोरोनाको खोपलाइ लिएर WHO बाट भर्खरै आयो दु:खद खबर !